ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများနှင့် ၎င်းတို့၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွင် အရောင်နှင့်အလုပ်လုပ်သော အခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ကွန်ပြူတာဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် အရောင်များကို အတိအကျမြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့အတွက် အနီရောင်သည် အနီရောင်ဖြစ်သင့်ပြီး အပြာသည် အပြာဖြစ်သင့်သည်။ ဖန်သားပြင်အရောင်များကို တတ်နိုင်သမျှ တိကျမှန်ကန်စေရန်နှင့်...
FireAlpaca သည် သင့်ရုပ်ပုံဖိုင်များကို ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည့် အခမဲ့ ရုပ်ပုံတည်းဖြတ်သည့် ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Photoscape၊ အခြားသော အခမဲ့ ပုံတည်းဖြတ်ခြင်း ပရိုဂရမ်ကဲ့သို့ပင်၊ FireAlpaca သည် မတူညီသော ပုံ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် တည်းဖြတ်ခြင်း ရွေးချယ်စရာများစွာ ပါရှိသည်။ အထူးပြုလုပ်ချက်များ၊ စစ်ထုတ်မှုများနှင့်...
Krita Studio သည် သင့်ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြု၍ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် ဒီဇိုင်းများ၊ ပုံဆွဲခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် ရုပ်ပုံဖိုင်များပေါ်တွင် အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ရန် သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် အခမဲ့နှင့် open source ကိရိယာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်သည် အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်...
Open Source ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းပရိုဂရမ်တစ်ခုအဖြစ် 15 နှစ်ကြာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးနောက် Inkspace သည် 2019 ခုနှစ်တွင် ဗားရှင်း 1.0 သို့ရောက်ရှိနိုင်ခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့်တည်းဖြတ်ခြင်းအင်္ဂါရပ်များကို ပေးဆောင်ထားပြီး Inkscape သည် vector ဂရပ်ဖစ်လုပ်ငန်းတွင် ပြင်းထန်သောပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပြီး Illustrator သို့မဟုတ် CorelDraw ကဲ့သို့သော...
Keep Safe အက်ပလီကေးရှင်းသည် သင့် Android စမတ်ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်များတွင် သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် အခမဲ့ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယို သိုလှောင်မှုအက်ပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် သိမ်းဆည်းလိုသော အချက်အလက်များကို အောင်မြင်စွာ သိမ်းဆည်းနိုင်စေသည့် အပလီကေးရှင်းကြောင့် သင်၏ မိုဘိုင်းလ်စက်ပစ္စည်းများတွင်...
Antivirus & Mobile Security သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများတွင် Android လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည့် ပြည့်စုံပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအက်ပ်တစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏တက်ဘလက်များနှင့် စမတ်ဖုန်းများကို ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ spyware နှင့် ခိုးယူမှုအမျိုးမျိုးတို့မှ...
Comodo Security & Antivirus အက်ပလီကေးရှင်းသည် Android စမတ်ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်အသုံးပြုသူများ ၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းပစ္စည်းများကို ပိုမိုလုံခြုံစွာနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များဘေးမှ ဝေးကွာစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် အခမဲ့အက်ပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံအလွန်ရင့်ကျက်သော Comodo ကုမ္ပဏီမှ ပြင်ဆင်ထားသည့်အချက်က ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေသည်။...
Sophos Free Antivirus အက်ပလီကေးရှင်းသည် Android အသုံးပြုသူများ ၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများတွင် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည့် ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် လုံခြုံရေးအက်ပ်များထဲမှဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအင်္ဂါရပ်များစွာပါ ၀ င်ပြီး antivirus ကိုသာမက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကာကွယ်မှုပေးစွမ်းနိုင်သော အပလီကေးရှင်းသည် ၎င်း၏အခမဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကြောင့်...
ဒေါက်တာ Safety သည် Android မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းအသုံးပြုသူများ အသုံးပြုသင့်သည့် အခမဲ့လုံခြုံရေးနှင့် အကာအကွယ်အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပလီကေးရှင်း၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ သင့်အား မလိုလားအပ်သော အန္တရာယ်ရှိသော အပလီကေးရှင်းများကို ရှာဖွေပြီး အသိပေးရန်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် ၎င်း၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်အပြင် အသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်များစွာကို ပေးဆောင်ပါသည်။...
CM Security Antivirus AppLock အက်ပလီကေးရှင်းသည် Android စမတ်ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းပစ္စည်းများကို အန္တရာယ်ရှိသောဆော့ဖ်ဝဲလ်မှကာကွယ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် အခမဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပလီကေးရှင်းသည် ၎င်း၏အသုံးပြုရလွယ်ကူသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ချိန်ညှိနိုင်သောအင်္ဂါရပ်များအပြင်...
Family Locator သည် သင့် Android စက်များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် လုံခြုံရေးအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Family Locator သည် ကလေးများနှင့် အမျိုးသမီးများ အထူးသဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အမည်မှ နားလည်နိုင်သကဲ့သို့ မိသားစုဝင်များ၏ တည်နေရာကို ခြေရာခံရန် ကူညီပေးသည်။ သင့်အတွက် လက်တွေ့ဘဝသည် ကြောက်စရာကောင်းပါက၊ အပြင်သွားစဉ်...
သင့်ဖုန်း၏လော့ခ်မျက်နှာပြင်ကို ငြီးငွေ့နေပါသလား။ Android ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်များထဲမှတစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောရွေးချယ်မှုများကိုတတိယပါတီအပလီကေးရှင်းများမှရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်လက်ချောင်းဖြင့် ဖိဆွဲခြင်းဖြင့် သင်ရေးဆွဲထားသော လုံခြုံရေးကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး နံပါတ်များဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် ကုဒ်များမှတစ်ဆင့် သင့်စခရင်လုံခြုံရေးကို...
Smart AppLock အက်ပလီကေးရှင်းသည် အထူးလုံခြုံရေးစကားဝှက်များနှင့် ပုံစံများဖြင့် သင်၏ Android စမတ်ဖုန်းများနှင့် တက်ဘလက်များပေါ်ရှိ အပလီကေးရှင်းများကို ကာကွယ်ရန် သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် အခမဲ့ကိရိယာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Android ၏ကိုယ်ပိုင်စကားဝှက်နှင့် လော့ခ်ချသည့်စခရင်ယန္တရားကို လုံလုံလောက်လောက်မကြိုက်သောသူများ အထူးသဖြင့် စမ်းသင့်သည်ဟု...
TrackView အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်၊ သင်သည် သင်၏ Android လည်ပတ်မှုစနစ် စမတ်ဖုန်းကို အဝေးမှ စောင့်ကြည့်နိုင်ပြီး ၎င်း၏ ကင်မရာကို ဝင်ရောက်ကာ ၎င်း၏ အချိန်နှင့်တပြေးညီ တည်နေရာကို လေ့လာခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ လုံခြုံရေးကို သေချာစေသည်။ TrackView သည် ခိုးယူမှုမှ ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် အပလီကေးရှင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ပျောက်ဆုံးသွားပါက သို့မဟုတ်...
AppLocker အက်ပလီကေးရှင်းသည် Android စမတ်ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်အသုံးပြုသူများကို ၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းလ်စက်ပစ္စည်းများတွင် ပိုမိုလုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်စေရန် အခမဲ့အပလီကေးရှင်းသော့ခတ်ကိရိယာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလွန်ရိုးရှင်းပြီး ရိုးရှင်းပြီး နားလည်နိုင်သော ဖွဲ့စည်းပုံပါရှိသော အပလီကေးရှင်းကြောင့် သင်သည် အခြားသူများ၏...
Private Photo Vault အက်ပလီကေးရှင်းသည် Android စမတ်ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများတွင် ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် အယ်လ်ဘမ်များကို အလွယ်တကူသိမ်းဆည်းရန် အခမဲ့လုံခြုံရေးအက်ပ်တစ်ခုအဖြစ် ပေါ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အတွက်ကြောင့် သင့်စက်နှင့်...
Parental Control အက်ပလီကေးရှင်းသည် Android စမတ်ဖုန်းများနှင့် တက်ဘလက်များဖြင့် သင့်ကလေးများ၏ မိုဘိုင်းလ်စက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကို ကန့်သတ်ရန် သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် အခမဲ့မိဘထိန်းချုပ်မှုအက်ပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များစွာနှင့် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများပါရှိသော အပလီကေးရှင်းတွင်၊ အချို့သောအဆင့်မြင့်ရွေးချယ်မှုများအတွက်...
VyprVPN အက်ပလီကေးရှင်းသည် ၎င်း၏အမည်မှ သင်နားလည်နိုင်သကဲ့သို့ Android စမတ်ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်အသုံးပြုသူများအတွက် ပြင်ဆင်ထားသည့် VPN အပလီကေးရှင်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်လာသည်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ဒေတာများကို ဂရုပြုသည့်အသုံးပြုသူများအပြင် ကန့်သတ်ချက်များမရှိဘဲ ပိတ်ဆို့ထားသောဝဘ်ဆိုဒ်များကို...
VirusTotal Uplink သည် မိုဘိုင်းလ်စက်အသုံးပြုသူများအား ဗိုင်းရပ်စ်များကို စကင်န်ဖတ်ရန် ကူညီပေးသည့် မိုဘိုင်းလုံခြုံရေးအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ VirusTotal Uplink သည် Android လည်ပတ်မှုစနစ်ကို အသုံးပြုထားသော သင့်စမတ်ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်များတွင် အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သည့် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အခြေခံအားဖြင့်...
360 Security Lite အက်ပလီကေးရှင်းသည် Android စမတ်ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်အသုံးပြုသူများအတွက် ၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းပစ္စည်းများကို ပိုမိုမြန်ဆန်၊ ပိုမိုထိရောက်စွာနှင့် လုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားသည့် ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအက်ပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းသည် သင့်အား ဗိုင်းရပ်စ်များမှ ကာကွယ်ပေးရုံသာမက နှေးကွေးမှုကိုလည်း...
Google Family Link (APK) သည် Android ဖုန်းများနှင့် တက်ဘလက်များတွင် အချိန်ဖြုန်းနေသော ကလေးများအတွက် မိဘအုပ်ထိန်းမှုဆိုင်ရာ အပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့် Android စက်တွင် အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည့် မိဘထိန်းချုပ်မှုအက်ပ်ဖြင့်၊ သင့်ကလေးက Google Play Store မှ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည့် အပလီကေးရှင်း/ဂိမ်းများမှ အရာအားလုံးသည်...
စခရင်လော့ခ်အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့် သင်၏ Android စက်များတွင် လော့ခ်ချကုဒ်ကို မေ့သွားခြင်းသည် မှတ်တမ်းဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများကို မျက်စိဖောက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောသော့ကုဒ်များကို ရှုပ်ထွေးစေပြီး ခန့်မှန်းရခက်စေသည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကုဒ်ကို မေ့သွားသည့်အချိန်များရှိသည်။ ဤအခြေအနေမျိုး...
WPS WPA Tester ကို အသုံးပြု၍ Wi-Fi ကွန်ရက်များသည် သင့် Android စက်ပစ္စည်းများမှ WPS ပရိုတိုကောအတွက် အားနည်းချက်ရှိမရှိ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ WPS WPA Tester အပလီကေးရှင်းသည် သင့်အား ကြိုးမဲ့မိုဒမ်နှင့် စက်ပစ္စည်းများကြားတွင် မြန်ဆန်သောချိတ်ဆက်မှုကိုပေးဆောင်သည့် WPS အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် Wi-Fi ကွန်ရက်များ၏လုံခြုံရေးကို...
NMSS Star အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ Android စက်များမှ သင့်လုံခြုံရေးကင်မရာများနှင့် နှိုးစက်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ Neutron မှတီထွင်ထားသည့် NMSS Star အပလီကေးရှင်းသည် ၎င်းတို့၏ လုံခြုံရေးအစီအမံများကို အလျှော့မပေးချင်သောသူများကို နေရာတိုင်းမှ ကင်မရာများနှင့် နှိုးစက်များကို ကြည့်ရှုရန် ခွင့်ပြုသည်။ လုံခြုံရေးကင်မရာများကို...
Virus Cleaner အပလီကေးရှင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များတွင် အောင်မြင်သောကိရိယာများကို ပေးဆောင်သည့်အပြင် သင့် Android စက်များတွင် ဗိုင်းရပ်စ်များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ Virus Cleaner အပလီကေးရှင်းသည် ၎င်း၏ကိရိယာပုံးပါသည့် စမတ်ဖုန်းအားလုံးတွင် တွေ့သင့်သည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည့်၊ သင့်ဖုန်းပေါ်ရှိ...
ESET Mobile Security & Antivirus သည် Android စမတ်ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်အသုံးပြုသူများအတွက် လျင်မြန်ပြီး အစွမ်းထက်သော ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲဆန့်ကျင်ရေးအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့် ဖြားယောင်းခြင်း ဆန့်ကျင်ကာကွယ်မှုတို့ဖြင့် သင့်အား ဘေးကင်းစေရန်အတွက် ESET Mobile Security ကို Google Play မှ Android ဖုန်းများနှင့်...
Samsung Kids Mode အက်ပ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်ကလေးများအား Android စက်ပစ္စည်းများကို ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် သင်ဖွင့်နိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကလေးများသည် နည်းပညာနှင့် ရောယှက်နေသောကြောင့် လက်ကိုမလွှတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်များကို နာရီပေါင်းများစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ မိဘများ လိုက်နာရမည့် အခြေအနေဖြစ်လာသည်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိ လုံခြုံသော...
AppLock သည် Android အပလီကေးရှင်း ကုဒ်ဝှက်ခြင်း ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း 50 ကျော်တွင် လူသုံးအများဆုံး Android အက်ပ်လော့ခ်ပရိုဂရမ်သည် Google Play တွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်သူ သန်း 100 ကျော်ရှိသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းကို သင့်ဖုန်းတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် သင်၏အပလီကေးရှင်းများကို စကားဝှက်၊ ပုံစံ သို့မဟုတ် လက်ဗွေသော့ခတ်မှုဖြင့်...
Dr.Web CureIt သည် သင့်လည်ပတ်မှုစနစ်ရှိ malware ကို ရှာဖွေရှင်းလင်းပေးသည့် အခမဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ထည့်သွင်းခြင်းမပြုဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်ဖြင့်၊ USB မှတ်ဉာဏ်ချောင်းများကဲ့သို့သော သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော သိုလှောင်မှုကိရိယာများတွင် ပရိုဂရမ်ကို run ခြင်းဖြင့် ထရိုဂျန်များ၊ ပိုးများ၊...
WiFi Network Monitor သည် အသုံးပြုသူများအား ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်လုံခြုံရေးကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အခမဲ့ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်စောင့်ကြည့်ရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မတူညီသောစက်ပစ္စည်းများစွာသည် ကျွန်ုပ်တို့အိမ်တွင် သို့မဟုတ် အလုပ်တွင်အသုံးပြုသည့် ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များသို့ ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်...
Spytech SpyAgent ပရိုဂရမ်သည် အင်္ဂါရပ်များနှင့် ရွေးချယ်စရာများစွာပါရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ပြူတာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သော့ခတ်ခြင်းများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ဖွင့်လှစ်ထားသော ပြတင်းပေါက်များကို အစီရင်ခံခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်နေသည့် အပလီကေးရှင်းများ၊ လည်ပတ်ခဲ့သည့် ဆိုက်များစာရင်းကို ဖန်တီးခြင်း၊...
Smart DNS Changer ပရိုဂရမ်သည် သင့်အား ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်စေမည့် အင်တာနက်လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ၎င်း၏အမည်ကိုကြည့်သောအခါ DNS ပြောင်းလဲသည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကဲ့သို့ထင်ရနိုင်သည်။ ပရိုဂရမ်ရှိ ကိရိယာအားလုံးကို အခကြေးငွေမယူဘဲ ပေးဆောင်သောကြောင့်၊ ၎င်းတို့တွင် အောက်ပါကိရိယာများ ပါဝင်သည်။ DNS...
Sophos Virus Removal Tool သည် သင့်ကွန်ပြူတာပေါ်ရှိ ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးမျိုးကို စကင်န်ဖတ်ကာ ၎င်းတို့ကို တွေ့ရှိပြီး ၎င်းတို့ကို ဖယ်ရှားရန် ကူညီပေးသည်။ သင့်ကွန်ပြူတာတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကာ မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှ အသိအမှတ်မပြုသည့် ဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေပါက၊ သင်သည် အဆိုပါပြဿနာများကို Virus Removal Tool ဖြင့်...
Outlook ပရိုဂရမ်ရှိ PST (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဖိုင်တွဲ) ဖိုင်တွင် အသုံးပြုသူနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များစွာ ပါဝင်ပြီး ၎င်းအချက်အလက်များကို အခြားအသုံးပြုသူများ ကြည့်ရှုမရနိုင်စေရန် သတ်မှတ်ထားသော အသုံးပြုသူအမည်နှင့်အတူ ကုဒ်ဝှက်ထားသည်။ သို့သော်၊ PST ဖိုင်ကို မတူညီသောနည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့် ကုဒ်ဝှက်ထားပြီး ဤစကားဝှက်များသည် သင်သတ်မှတ်ထားသည့်...
USB Manager သည် သင့်ကွန်ပြူတာ၏ USB အပေါက်များကို ပိုမိုထိန်းချုပ်ပေးသည့် သေးငယ်သော အပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် မည်သည့်အကန့်များမျှ မပါရှိဘဲ စနစ်ဘားမှ လုံး၀ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းကိုမဆို သင့်ကွန်ပြူတာသို့ ချိတ်ဆက်ပြီး အလုပ်မလုပ်စေရန် တားဆီးလိုပါက ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ flash memory၊ ပရင်တာ၊ စကင်နာ...
USB Flash Security သည် သင်၏ USB Flash drive များကို စာဝှက်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်မှုပေးသည့် ကုဒ်ဝှက်ခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်သည် ကြော်ငြာပံ့ပိုးပေးသည့် ပရိုဂရမ်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ထည့်သွင်းစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်များကို အာရုံစိုက်သင့်သည်။ သတိမထားပါက၊ ၎င်းသည် သင့်အင်တာနက်ဘရောက်ဆာများတွင် အပြောင်းအလဲအချို့ကို...
Ratool ပရိုဂရမ်သည် အခမဲ့နှင့် အလွန်ရိုးရှင်းသော အင်တာဖေ့စ်ပါရှိသော အသုံးဝင်သော ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်ကွန်ပြူတာအတွင်းသို့ USB ထည့်သွင်းမှုများဖြင့် ဖြုတ်တပ်နိုင်သော disk များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေရန် လွယ်ကူစေသည်။ ပရိုဂရမ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ USB သိုလှောင်ကိရိယာများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေပြီး ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင်...
IP Hider သည် အသုံးပြုသူများ၏ IP အစစ်အမှန်များကို ဖုံးကွယ်ကာ၊ သင့်ကွန်ပျူတာများသို့ ရောက်ရှိလာနိုင်သည့် တိုက်ခိုက်မှုများမှ သင့်ကို ကာကွယ်ပေးပြီး သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် အင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင် ခြေရာခံမထားခဲ့စေရန် သေချာစေသည်။ ပရိုဂရမ်သည် မတူညီသော ပရောက်စီဆာဗာမှတဆင့် သင့်အင်တာနက်အသွားအလာကို လုံခြုံစေပါသည်။ သင့် IP ကို ​​၎င်းအသုံးပြုသည့်...
Charles ပရိုဂရမ်သည် သင့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် ဝဘ်ပရောက်စီ (HTTP proxy/HTTP မော်နီတာ) ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ Charles မှတဆင့်အင်တာနက်သို့ဝင်ရောက်ရန်ခွင့်ပြုချက်ပါရှိသောသင်၏အင်တာနက်ဘရောက်ဆာသည်သင်၏ကွန်ပျူတာအတွင်းဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်ထွက်ခွာခြင်းဒေတာအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုနေစဉ်တွင် သင့်ဘရောက်ဆာနှင့်...
ကျွန်ုပ်တို့သည် အင်တာနက်ပေါ်တွင်သာမက ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်သုံး ကွန်ပျူတာတွင်ပါ စကားဝှက်များစွာကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤအရာများသည် ကျွန်ုပ်တို့ဝှက်ထားသောဖိုင်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းသွင်းထားသည့်ဆိုက်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကုဒ်ဝှက်ထားသောဖိုင်များ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ တခါတရံတွင် ၎င်းတို့ကို မှတ်မိရန် ခက်ခဲပြီး ၎င်းတို့ကို ရှာမတွေ့ပါ။ ဤနေရာတွင် KeePass...
AL Proxy သည် မကြာသေးမီက တိုးလာနေသော ဝဘ်ဆိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်းများကို အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် developer များမှ ပြင်ဆင်ထားသည့် ပရောက်စီပရိုဂရမ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်သည်အသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည်တူရကီဘာသာစကားဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပရိုဂရမ်ဖြင့်သင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်လိုချင်သောဆိုဒ်များကိုလွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်နိုင်သည်။...
AntiLogger သည် ခိုင်မာသောဆန့်ကျင်ရေးနည်းလမ်းများအပါအဝင် အန္တရာယ်ရှိသောဆော့ဖ်ဝဲလ်၏တိုက်ခိုက်မှုနည်းလမ်းများကို တီထွင်ဆန်းသစ်ထားသော လုံခြုံရေး module များဖြင့် လက်မှတ်ဒေတာဘေ့စ်မလိုအပ်ဘဲ သင်၏ Information Security ကို အလိုလိုကာကွယ်ပေးပါသည်။ Antilogger သည် လူသိများသော နည်းလမ်းများအားလုံးဖြင့် လုပ်ဆောင်ပြီး သတင်းအချက်အလက်ခိုးယူမှုအတွက်...
Password Safe ပရိုဂရမ်သည် open source အဖြစ် ဖန်တီးထားသော အခမဲ့ စကားဝှက်နှင့် အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှု ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ မတူညီသောပရိုဂရမ်များ သို့မဟုတ် သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်ဝဘ်ဆိုက်များတွင် အကောင့်များနှင့် စကားဝှက်များ များပြားလာခြင်းကြောင့် ရှုပ်ထွေးမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရှုပ်ထွေးမှုများကို ရှောင်ရှားရန် ဤအခမဲ့ကိရိယာသည် သင့်အား...
Ad-aware Web Companion ပရိုဂရမ်သည် သင့်အင်တာနက်ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိသောဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် တိုက်ခိုက်မှုများမှ သင့်ကိုယ်သင်ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် အခမဲ့ပရိုဂရမ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပင်မစာမျက်နှာမှ ဖြားယောင်းတိုက်ခိုက်မှုများသို့ နည်းလမ်းများစွာဖြင့် သုံးစွဲသူများကို ကူညီပေးနိုင်သည့် အပလီကေးရှင်း၏ မျက်နှာပြင်သည်...
သင့်ကွန်ပြူတာတွင် ထည့်သွင်းပြီး ဖျက်လိုက်သော လုံခြုံရေးနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ဆော့ဖ်ဝဲသည် ခဏအကြာတွင် သင့်စက်ပေါ်တွင် မမျှော်လင့်ထားသော နှေးကွေးမှုနှင့် ပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ Windows လည်ပတ်မှုစနစ်သည် ပရိုဂရမ်များကို ဖယ်ရှားရန် ရွေးချယ်ခွင့်ကို ပေးသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် ခေါင်းမာသော ပရိုဂရမ်များသည် သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်...
သင်၏အင်တာနက်အကောင့်များနှင့် စကားဝှက်များကို ဘုံစကားဝှက်တစ်ခုတည်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားလိုပါက၊ သင်၏အင်တာနက်အကောင့်များနှင့် စကားဝှက်များကို ထိန်းချုပ်ထားလိုပါက LastPass ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ သင်၏အင်တာနက်အကောင့်အားလုံးကို လုံခြုံသောနေရာတွင် အကောင့်ဝင်ထားခြင်းဖြင့် ဘုံစကားဝှက်တစ်ခုဖြင့် သင့်အကောင့်များကို အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည်။ LastPass...
RegRun Reanimator သည် အစွမ်းထက်ပြီး နောက်ဆုံးပေါ် လုံခြုံရေးပက်ကေ့ဂျ်များကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့် Greatis Software မှ ဖန်တီးထားသော အခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ကွန်ပြူတာပေါ်တွင် စကင်န်ဖတ်ခြင်းဖြင့် အန္တရာယ်ရှိသော Trojan/Adware/Spyware နှင့် rootkit ဖိုင်များကို ဖျက်ပစ်ရန် ကူညီပေးသည့် ဤကိရိယာသည် ၎င်း၏ရိုးရှင်းသော ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ထိရောက်သော...
Norton ၏ စကားဝှက်မန်နေဂျာ၊ Identity Safe သည် သင့်အား ဝဘ်ဆိုက်များသို့ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာနှင့် ပိုမိုလုံခြုံစွာ ဝင်ရောက်နိုင်စေပါသည်။ Norton Identity Safe ကို အောက်တိုဘာ ၁ ရက်အထိ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်သူများသည် ၎င်းကို အခမဲ့ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်၊ အပလီကေးရှင်းကို ပေးချေပါမည်။ Norton Identity Safe သည် အပြန်အလှန်ပလပ်ဖောင်းနှင့်...